Ntụrụndụ / n'ike mmụọ nsọ - Geofumadas
Echiche na echiche nke onye edemede nke geofumadas
Hapụ Venezuela n'oge blackouts
Echere m na ụfọdụ maara ọnọdụ dị na Venezuela, m na-ekwu ụfọdụ n'ihi na amaara m na Venezuela abụghị etiti nke eluigwe na ala, ya mere enwere ndị na-amaghị ebe ọ dị. Ọtụtụ n'ime ndị na-agụ m, na-eche ma na-ata ahụhụ site na ọnọdụ site na mpụga, ole na ole kwenyere na ha maara ihe na-eme, ha na-ekpe ikpe ...
Ntụrụndụ / n'ike mmụọ nsọ, Politics na Democracy
Hapụ Venezuela na Colombia - My Odyssey
You nwetụla mgbe ị metụrụ ahụ n’enweghị mkpụrụ obi? Ahụla m ya n'oge na-adịbeghị anya. The organism na-aghọ ihe inert kwadoro na ị na-eche na-ebi n'ihi na ọ na-eku ume. Amaara m na ọ ga-esiri m ike nghọta, na ọbụna karị mgbe m na-eche ịpako banyere onwe m dị ka onye ziri ezi, juputara na udo nke ime mmụọ na ...
Foto 13 nke akụkọ ihe mere eme nke Entzụ ahịa mmadụ
Afọ 2015 agwụla iji mee mmemme, anyị na-ewetara gị foto ole na ole akụkọ ihe mere eme na-echetara anyị na oge agafebeghị maka obi ụtọ ya. LZ 129 Hindenburg, ụgbọ elu nke yiri Zeppelin, ọkụ bibiri ka ọ dabara na New Jersey na May 6, 1937. Ihe mberede ahụ kpatara ọnwụ nke 36 ...
Engineering, innovations, Ntụrụndụ / n'ike mmụọ nsọ
Akụkụ 6 iji tụlee na njikọta nke ndekọ - Cadastre
Ime Cadastre na Reallọ Ahịa na-arụkọ ọrụ ọnụ bụ otu n'ime ihe ịma aka kachasị adọrọ mmasị na usoro mmezi nke usoro ikike nke ihe onwunwe. Nsogbu a na-abụkarị otu, ọbụnadị gafere ebe ndị anyị na-asụ Hispanic. N'otu aka, ezigbo echiche nke ...
cadastre, My egeomates, Ntụrụndụ / n'ike mmụọ nsọ
UPSOCL - Ebe mkpali
Ya interface dị mfe, na-enweghị sidebars, na-enweghị mgbasa ozi, dị nnọọ a search ụdị na ihe fọrọ nke nta-adịghị ahụ anya menu na ise edemede. Ọ bụ saịtị na-asụ Spanish UPSOCL, raara onwe ya nye maka ịkekọrịta ihe ndị dị mkpa maka ụwa. Ihe di iche-iche, ihe nduhie, na ihe kwesiri ihu. Ya…
Internet na Blogs, Ntụrụndụ / n'ike mmụọ nsọ
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ leta ikpeazụ nye ndị ọrụ m ... ahapụghị m
Naanị taa ụbọchị iri gara aga, dị ka ị maara, akwụsịrị m ịbịanye aka na mpempe akwụkwọ metụtara ọrụ nke mere ka m nọrọ ọrụ ma nwee mmụọ nsọ ruo afọ asaa. O doro anya na ha ga na-eche maka nkọwa, n'ihi na ọ bụ naanị mmadụ ole na ole maara nke ọma banyere ha ụbọchị ole na ole gara aga, ọ bụ ezie na ọ bụ site na ụbọchị m kpebiri ...
…maka ugbu a…
Naanị mgbe ọhụụ na-agbanwe ọnọdụ malitere ịkọ ọkọ ... M kesara otu n'ime ọfụma kachasị mma m hụworo site n'aka otu onye ndụmọdụ m. Dika achoghi m igbunye gi na ozi izugbe na ulo oru (i bu ihe ozo) ana m agwa gi na: I di 09:30 na June 28, ...
Enwere m ike iji ihe oyiyi Google Earth maka cadastre?
Inwe ezigbo enyi na enyi Dutch taa, m na-egosipụta ụfọdụ myirịta dị n'etiti usoro ọrịa kansa na-eduga na akụrụngwa akparamaagwa na mmekọrịta nke Google Earth na njedebe na-ezighi ezi: Nkeji 1: Egwu. Onye ọkachamara na-aga n'ọhịa na nzaghachi nke onye nwe ya rịọrọ ya ...
cadastre, Google Earth / Maps, Ntụrụndụ / n'ike mmụọ nsọ
4 mkpa oge na akụkọ ihe mere eme nke egeomates
- Anyị kwesịrị inwe blog ... Kwuru onye isi m (HM), na anya ya kwụsịrị ụwa a. O wutere m na amaghị m okwu nwoke nwoke 73 gbara afọ tupu mkpesa m na-agba isi ike banyere ihe mere eji kwụsị ịntanetị na ndị ọchịchị na-arụ ọrụ mmezi nke cadastral. Ihe kariri ikwu ya na ...
Recycled si m n'abalị owu na-ama na Guatemala, ugbu a na m na-achọ ịga ebe m na-ahapụ ihe n'ihi na ị na-atụrụ ndụ onwe gị. Amaara m, ọ naghị ejupụta ihe ahụ na teknụzụ ... mana ọ dị. Ọ bụ nwa agbọghọ mara mma nwere anya ojii na ntutu dị ogologo rue ubu ya, sitere na ndị ikwu nwere ikike nke ndị ọrụ ụlọ akwụkwọ ...
Nsonye nke mmekọrịta mmadụ na usoro ọzụzụ ọzụzụ ọrụ aka
Izu a ka m na-agwa otu n’ime ndị ọrụ m okwu, anyị na-eme akụkọ ihe mere eme banyere isi awọ na afọ ndị werela anyị na usoro mmepe ndị a - karịa nke m na-akwado isi nkwọcha ya. Akọwara m otú mgbanwe nke ihe ndọpụ uche m si mee ka m gbanwee site na ngalaba nka wee banye na injinịa wee banyezie ...
Akụziri CAD / GIS, Ntụrụndụ / n'ike mmụọ nsọ
Esi esi jikọọ na Ịntanetị na mpaghara dịpụrụ adịpụ
Ana m eche mgbe niile ihe m ga - eme ma ọ bụrụ na m ga - akwaga n'otu obere obodo, ebe enwere ike ịnweta njikọta anyị nwere n'obodo a. More ugbu a na manias anyị maka mmekọrịta nke sitere na Internetntanetị na-eme ka anyị mara ozi ịntanetị ọhụrụ, akụkọ na netwọkụ mmekọrịta ...
Ntụrụndụ / n'ike mmụọ nsọ, njem
32 afọ mgbe e mesịrị, jikọọ wires, mechie cycles
Njem ezumike ezumike a nke oge ezumike a abụghị naanị ihe mgbakasị ahụ. Ọ bụghị naanị m, ọ bụ maka ndị ọzọ ezinụlọ m sonyeere m. Mgbe ụfọdụ, ihe atụ ahụ ha na jikọtara ọnụ na-adị ka ihe mere eme n’ezie nke na ọ na-ewe oge iji tụgharịa uche. N'oge okpomọkụ ...